कोरोनाबाट ४ को मृत्यु, २१जना संक्रमणमूक्त,संक्रमितहरु १७७ पुगे( विवरण सहित )
केराबारी गाउँपालिकामा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट हाल सम्म २१ जना संक्रमण मुक्त बनेका छन् ।
कोरोना संक्रमण दर बढेसंगै संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या पनि थपिदै गएको छ ।केराबारी गाउँपालिकामा हाल सम्म १७७ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । जसमध्ये ९० पुरुष र ८७ जना महिला रहेका छन् ।
गाउँपालिका भरी २०५ जनामा पिसिआर र १८४ जनामा एन्टिजेन टेष्ट गर्दा सो संख्यामा संक्रमणपुष्टि भएको हो । संक्रमणपछि २१ जना सामान्य अवस्थामा फर्किएपनि बाँकी १४१ जना होम आइसोलेसनमा रहेको गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखाले जनाएको छ ।
हाल सम्म ४ जनाको कोरोना संक्रमणबाट निधन भएको छ ।
कुन वार्डमा कति पुगे संक्रमित ?
केराबारी गाउँपालिकाको कोरोना संक्रमणबाट जोखिम क्षेत्रको रुपमा अहिले ७ नम्बर वडा रहेको छ । बजार देखि पश्चिम क्षेत्रमा रहेको डागी,मुगु,नर्कटे,सिदुरे लगायतको टोलवस्ती रहेको यसवडामा हाल सम्म ७ जना संक्रमित भएका छन् ।
केराबारीको मुख्य बजारको पूर्व पश्चिम बाटो देखि दक्षिण पटि बजारसंगै जोडिएको जंगलको सीमाना सम्म रहेको अाँमजुगी, हजारविघा लगायतको टोलवस्ती रहेको यस वडामा पनि संक्रमितको संख्या थपिदै गएको छ । यस वडालाई पनि जोखिम क्षेत्रको रुपमा हेरिएको छ ।
हाल सम्म ३५ जना संक्रमित पुगेको छ । संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि यस टोलमा शिल गरिएको भनिएपनि कुनै प्रभावकारी नभएको र कतिपय संक्रमितहरुले सामान्य रुघा खोकीको रुपमा लिने र परिक्षण गर्न नजाने, संक्रमित यत्रतत्र हिडडुल गर्नाले संक्रमण वढ्दै गएको छ ।
गाउँपालिकाले सार्वजनिक गरेको पछिलो तथ्यांक अनुसार वडा नं. ९ मा पनि संक्रमितहुनेको संख्या ३५ जना पुगेको छ । केराबारीको सवैभन्दा ठूलो भूभाग रहेको यस वडामा भलुवा विराजे देवीझोडा घंघरु लगायतको टोलवस्ती रहेको छ । बेलबारीसंगको खुल्ला सीमाना र बढी आउजाउ हुने भएकाले पनि यस वडामा संक्रमण दर बढेको बताइएको छ ।
साविक यांगशिला गाविस अन्र्तगत पर्ने यस वडा धरान पानवारी नाका अन्र्तगत पर्दछ । यस वडामा पनि कोरोना संक्रमणबाट १ जनाको निधन भइसकेको छ । भने सक्रमितको संख्या हाल सम्म २६ जना पुगेको छ ।
पर्यटकिय क्षेत्रको रुपमा रहेको जेफाले क्षेत्र रहेको साविक सिहंदेवी गाविस अन्र्तगत पर्ने यस वडामा पनि पछिलो समय संक्रमण दर बढ्दै गएको छ । गाउँघरमा हुने विवाह भोज जन्मोत्सव जस्ता कार्यक्रममा सहभागि हुने कोरोना संक्रमण भइ हाले पनि परिक्षण गराउन नजाने र केही हुदैन भन्ने सोचका कारण फैलिएको स्थानीय शिक्षकहरुले बताएका छन् । यस वडामा पनि टोल वस्ती संगठनहरुले टोल टोलमा शिल गरेका छन् ।
केराबारीको प्रमुख केन्द्रको रुपमा रहेको यस वडा बजार क्षेत्रमा पर्दछ । मूख्य बजार क्षेत्र भएकाले यहा वढी मात्रामा मानिसहरुको जमघट हुने आउजाउ गर्ने क्रम नरोकिएको पाइन्छ । निषेधाज्ञाको मानिसहरुको जमघट बाक्लो हुने गरेको कारण संक्रमण दर विस्तारै बढ्दै गएको छ । हाल सम्म यस वडामा १६ जना संक्रमित फेला परेका छन् । यस वडामा पनि १ जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ ।
यस वाहेक वडा नं. ३ मा ७ जना, वडा नं.६ मा २ जना,वडा नं.१ मा ३ जनालाई संक्रमण पुष्टि भएको छ भने हाल सम्म वडा नं.४ सुरक्षित रहेको छ ।